ဒီဆောင်းပါးတွေထဲကအများစုဟာအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များစရာဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားနှင့်သို့ရာတွင်-ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများက (အနည်းငယ်သည်အခြားစာရေးဆရာများကရေးသားခဲ့ကြသည်) မှနဲ့ပေါင်းစပ်မှ neuroscience တစ်ပုံစံကိုလိုက်နာခဲ့ကြသည်။ ဆောင်းပါးတွေထဲကအတော်များများအများစုမှီ, 2009-2013 အကြားကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသတည်း porn အသုံးပြုသူများအပေါ်မကြာသေးမီကဦးနှောက်လေ့လာမှုများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ တိကျနေစဉ်, သူတို့ porn ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်နည်းနည်းဦးနှောက်သုတေသနလည်းမရှိသော်လည်းအဖြစ်ဖတ်ပါ။ တိုင်းအာရုံကြောလေ့လာမှုခြိနျးတှေ့ဖို့ porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စာပေ၏မကြာသေးမီကမှ neuroscience-based ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပြုပါအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, စွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောရဝုဏ်ထောက်ခံပါတယ်။ အညွှန်းစာအများကြီးနှင့်အတူသော့ချက်အယူအဆ၏တိုတောင်းတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့, ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။ porn စွဲနှင့်မျိုးစုံအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှဦးဆောင် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှထောက်ခံမှုချေးလေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာ၏စာရင်းများအဘို့, ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ.
porn, အသစ်အဆန်းများ, နှင့် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု (2011)
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? (2011)
Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo (2012) Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲ (2011) ကြမယ်,
Porn စွဲသည်လိင်စွဲလမ်းမှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသည် (2011)
(ဗီဒီယို) ဂဏ္ My ရီဒဏ္Pာရီပုံပြင်များ - စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနောက်ကွယ်ရှိအမှန်တရား၊ (Gabe Deem) (၂၀၁၅)
ပုဒ်မတစ်ခုမှာ: သငျသညျ Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်ခံရဖို့ပြောင်းလဲ
အဆိုပါဦးနှောက်တွင် porn (2010)
ပုဒ်မသုံး: အသုံးပြုသူအပေါ် Porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အဆိုပါသူရဲဘောကြောင်ခြင်္သေ့ရုံ Porn ရန်လွန်း Masturbating ခဲ့သလဲ (2010)
ပုဒ်မလေးခု: အဆိုပါ Porn Debate (ကိုလညျးရှု: မေးခွန်းထုတ်စရာနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ)
(ဗွီဒီယို) Jacob Hess (၂၀၁၈) က“ လူတွေကညစ်ညမ်းသိပ္ပံပညာကိုဝါဒဖြန့်သည်ကိုသူတို့မြင်သောအခါအသိအမှတ်ပြုသည်” - အလုပ်နည်းဗျူဟာတစ်ခုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် "astroturfers" က porn ကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုသူကိုငြင်းဆိုသည်။
(ဗီဒီယို)“ ညစ်ညမ်းသောသုတေသန - အဖြစ်မှန်လား၊ စိတ်ကူးယဉ်လား” ဂယ်ရီ Wilson (၂၀၁၈) မှ - Wilson သည်ညစ်ညမ်းသောဝါဒဖြန့်ချိမှု ၅ ခုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြပြီးညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်း၊
(ဗီဒီယို) ပုဏ္ဏားဒဏ္--ာရီ - Gabe Deem ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရား (၂၀၁၅)
ပွိုင့်ခြင်းနှင့်ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုကဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်ပြောနေတာနီးပါးတိုင်း naysayer တစ် debunking များအတွက်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are?”, Marty Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က။
ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ , 2015 (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ), ညစ်ညမ်းစွဲ (3) ထောက်ပံ့ 2017 တစ်ဒါဇင်အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်စဉ်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ MD Do Norman,“ ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဦး နှောက်” (၂၀၀၇)
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြော်ငြာကြမယ်,dictions (2013)
ညစ်ညမ်းစွဲ၏တည်ရှိမှုကိုထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားဒွန်ဟီလ်တန်, MD (2013) က ?, ရှိပါသလား
porn စွဲလိင်စွဲလမ်း (2011) မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ Porn Debate ၏အဆုံး? (2010)
ယောက်ျားလေးများနှင့် Porn: တစ်ဦးက Moving အဆိုပါ နှစ်မှစ. (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်း 2014)
'မကောင်းသောအတွေးတစ်ဘီလီယံ' သည်လျှပ်တစ်ပြက်တစ်ခုမျှသာ (၂၀၁၂)
ယောရှုသည် Grubbs ၏“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု” သုတေသနနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုသိုးမွှေးထိုးနေသလား။ (၂၀၁၆)
အယ်ဒီတာမှပေးစာ ": များ၏ဝေဖန်မှုPrause et al ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု "(2016)
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုစကေး - အသုံးဝင်သည်မဟုတ်လား” ၏သုံးသပ်ချက် (Hald & Malamuth, 2008)
“ ကြည့်ရှုခြင်းဆိုသည်မှာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် - မလုပ်ဘူးလား” ကိုဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၁၃)
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံသူများ” တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အထောက်အထားမရှိခြင်းကိုလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်တစ်ခုသို့အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၏သုံးသပ်ချက် (Prause et al။ , 2013)
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း "လိင်ဆန္ဒသည် hypersexuality မဟုတ်ဘဲ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကရရှိသော neurophysiological တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်"သံမဏိ et al ။, 2013)
ဒေးဗစ်လလေ၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်ပီတာဖင်နင်တို့၏“ Clကရာဇ်မင်းအဝတ်အစားမရှိ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များ၏နောက်ကျသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများနှင့် 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ' နှင့်မကိုက်ညီသောထိန်းချုပ်မှုများ " (Prause et al။ , 2015)
ဝေဖန်မှု -“ ပျက်စီးသွားသောကုန်ပစ္စည်းများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြားတွင်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်သဘောထား” (Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen, 2017)
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်“ အမျိုးသမီးများကိုမုန်းတီးခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍“ ဝေဖန်မှု” လား။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်စားပြုသူအမေရိကန်နမူနာတွင်အသုံးပြုသူများထက်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာသဘောထားများပိုမိုရှိကြသည်။ ” (2016)
"ဟုအဆိုပါလင်မယားဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ခံစားသက်ရောက်မှု: ပွင့်လင်း-အဆုံးသတ်, ပါဝင်သူ-အကြောင်းကြား, Bottom-Up ကိုသုတေသနကနဦးတွေ့ရှိချက်" ၏ဝေဖန်မှု (2016)
ပုဒ်မငါးခု: ဆက်ဆံရေးနှင့် Porn
အဘယ်ကြောင့် Romeo Juliet လျစ်လျူရှုနေပါသလား? (2011)
Porn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ (2012)
ပုဒ်မခြောက်: တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း & သုတ်ရည်လွှတ်ဆောင်းပါးများ
သုတ်ရည်လွှတ်: ဘယ်လိုမကြာခဏနျြးမာရေးကောငျးသလော (2012)
မိနျးမ, တုန်ခါမှုနှင့်တုန်ယင်လိင်သုတေသန (2013)
vibrators နှင့်“ Dead Vagina Syndrome” - သုတေသနနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသတင်း (၂၀၁၈)
လိင်နှင့်စာရိတ္တ: ယှဉ်ပြိုင်အာရုံခံအကြားတစ်ဦးက Debate (2011)
Cupid (2011) မှစကားပြောလုပ်နည်း
အခနျးခွော: ပိုလျှံဖို့လမ်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်ကနေကျအခနျးဖြစ်ပါသည် Cupid ရဲ့အဆိပ်သင့် Arrow. ၎င်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ခန့်တွင်အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပြီး porn ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရာကိုရှင်းပြသည်။